Wasaaradda Caafimaadka Puntland oo qabatay shir kusoo bandhigtay waxqabadkeedda (Sawiro) – Radio Daljir
Diseembar 15, 2012 9:59 b 0
Garoowe, Dec 15, Wasaaradda Caafimaadka Dawladda Puntland ayaa maanta Garowe ku qabatay shir ?oo diirada lagu saarayo ?waxqabadka Wasaaradda Caafimaadka sanadka 2012 iyo ?horumarinta adeegyada Caafimaadka ?Puntland.
Shirkaasi waxaa ka qeyb galay wakiilo ka socday 22 Hay?addood oo isugu jiray kuwa maxaliga ?iyo kuwa caalamiga ah ?iyo isku duwayaasha Wasaaradda Caafimaadka ee Goboladda Puntland.
?Cali Cabdilaahi Warsame Wasiirka Wasaaradda Caafimaadka Dawladda Puntland oo dulmar ku samaynayay warbixin uu kaga waramayay waxqabadka Wasaaradda waxaa uu sheegay in sanadkaan si weyn ?loo kordhiyay adeegyada Caadimaadka Puntland , Iyadoo uu sheegay in la gaarsiiyay gobo kabaxsan dhulka laamiga ah.
Sidoo kale Wasiirka Caafimaadka Puntland waxa kale uu sheegay in la diyaariyay xeerkii guud ee Siyaasada Caafimaadka Puntland kaasi oo loo gudbiyay Barlamaanka Puntland.
Wasiiru Dawlaha Wasaaradda qorsheynta , xiriirka ?caalamiga ah iyo arimaha federalka Puntland Sayid Maxamed Cabdulle Xasan oo kamid ah xubnihii ka qeyb galay shirkaasi ayaa hadal uu ka jeediyay shirka waxuu hay?adda maxaliga ah iyo kuwa caalmiga ugu baaqey ?inay ilaaliyaan sharciga Dawladda Puntland ee la xiriira mashaariicda lagu qasaariyo goobaha aan munaasibka ahayn.
shirkaan ayaa muddo ?labo maalin ah ka socondoona xarunta Wasaaradda Caafimaadka ?ee Garoowe, Waxaa gabagabadiisa lagu wadaa inay Wasaraddu soo saarto qorshayaaasha uga degsan sanadka 2013.